Saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada Puntland oo weerar xoogan lagu qaaday – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada Puntland oo weerar xoogan lagu qaaday
Koox hubeysan ayaa habeenkii xalay weerar culus ku qaaday saldhig ay ciidamada Puntland ku leeyihiin Waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Weerarkaasi oo ahaa kuwa loo adeegsaday Bambaanooyin nooca kuwa gacanta laga tuuro ah, ayaa sida la sheegay ka dhashay qasaare lixaad leh, inkastoo aan si dhab ah loo xaqiijin karin inta uu qasaarahaasi gaarsiisan yahay.
Sarkaal ka tirsan ciidamada Puntland oo aynu qadka teleefanka kula xiriirnay ayaa inoo sheegay in kooxdii weerarka kusoo qaaday saldhigaasi dib loo celiyay, kadib markii ay iska caabin kala kulmeen ciidanka Puntland.
Illaa iyo haatan lama oga cidda ay ka tirsanaayeen kooxda weerarka kusoo qaaday saldhiga ciidamada Puntland ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo.
Dhinaca kale, ciidamada Puntland ayaa saakay howlgal baaritaano ah ka sameeyay xaafadaha ku yaalla waqooyiga Gaalkacyo, kaas oo ay ku baadi goobayaan dadkii weerarkaasi ka dambeeyay.
Si kastaba ha ahaatee, weerarkaan ayaa kusoo beegmaya maalmo kadib markii maamulada Puntland iyo Galmudug ay sameeysteen ciidamo isku dhaf ah oo ka shaqeeya amniga magaalada Gaalkacyo, kuwaas oo tiro ahaan gaaraya illaa 50 askari.